GoSite: Sehatra iray manontolo ho an'ny orinasa madinidinika handehanany nomerika | Martech Zone
GoSite: Sehatra iray manontolo ho an'ny orinasa madinidinika handehanany nomerika
Alarobia, Septambra 16, 2020 Talata, Septambra 15, 2020 Douglas Karr
Ny fampidirana dia tsy mora eo anelanelan'ny serivisy ilain'ny orinasanao kely sy ireo sehatra misy. Ho an'ny automatisation anatiny sy ny traikefa mpanjifa tsy misy tomika mba hiasa tsara dia mety tsy ho an'ny teti-bolan'ny ankamaroan'ny orinasa kely.
Ny orinasa madinidinika dia mila fampandehanana miasa manerana ny sehatra:
Website - tranokala madio izay namboarina ho karohina ao an-toerana.
Messenger - ny fahaizana mifandray amin'ny fomba mahomby sy mora amin'ny real-time miaraka amin'ny prospect.
famandrihana - Fandaharam-potoana hanompoana tena miaraka amin'ny fanafoanana, fampahatsiahivana ary fahaiza-mandahatra.
fandoavam-bola - ny fahaizana faktiora amin'ny mpanjifa ary andoavany vola.
hevitra - ny fahaizana manangona, manara-maso ary mamaly ny hevitry ny mpanjifa.
Customer Relationship Management - angon-drakitra ho an'ny mpanjifa izay azo ampiasaina mavitrika mba hifandray amin'ny mpanjifa.
GoSite dia sehatra iray manontolo izay manamora ny fahitan'ny mpanjifa sy ny famandrihana ary ny fandoavany ny serivisinao amin'ny Internet. Ny sehatra dia tsy mila fahaizana teknika ary tonga miaraka amin'ny fampiharana finday sy fandoavam-bola aza. Ahitana:
Website - tranokala mandray andraikitra feno izay mora apetraka sy hamboarina.
fandoavam-bola - Ekeo ny fandoavam-bola avy amin'ny Apple Pay, American Express, Visa, Google Pay, MasterCard, Discover… amin'ny alàlan'ny findainy, fandefasan-kafatra an-tsoratra, na mifanatrika.
Messenger - sehatra iray hamerenana ny fotoananao sy hampitomboana ny fahafaham-pon'ny mpanjifa. Anisan'izany ny fandefasan-kafatra, fandefasan-kafatra, fandefasan-kafatra Google My Business ary mpamaly fiara.
fandaharam-potoana - ampanjifaina ny elanelam-potoana ary avelao ny mpanjifa hisafidy ho azy ireo fotoana mety aminao. Ahitana fandaharam-potoana, famerenana fandaharana, fanafoanana ary fampahatsiahivana amin'ny alàlan'ny mailaka sy SMS.
Heverin'ny mpanjifa - mangataha, valio, ary tantano amin'ny toerana iray ny hevitry ny mpanjifanao. Anisan'izany ny hevitra momba ny Google sy ny Yelp.
Customer Relationship Management - GoSite dia manana ivon-toerana ifandraisana afovoany izay mifamatotra amin'ny Quickbooks, Outlook, ary Google ho an'ny vahaolana fitantanana mpanjifa tsy misy tohika. Ny Hub Contact dia ahafahanao mandefa hafatra, mamerimberina fotoana nifanarahana, ary mandefa tolotra fampiroboroboana amin'ny tsindry 1-click.
Biraon'ny orinasa - miaraka amin'ny fidirana tokana, azonao atao ny mampifandray sy mifehy eo noho eo ny orinasanao amin'ny lahatahiry orinasan-tserasera 70 mahery.
Integrations - GoSite dia manana API ary mifandray avy hatrany amin'ny Google, Facebook, Yelp, Thumbtack, Quickbooks, Google Maps, ary na Amazon Alexa aza.
Enterprise - GoSite koa dia manana toerana marobe orinasa fahaiza-manao.
Manomboha amin'ny Gosite maimaim-poana
Tags: amazon alexalahatahiry orinasafifandraisana hubCRMfifandraisana amin'ny mpanjifaFacebookGoogle Mapsgositefaktioralahatahiry orinasa eo an-toeranafamandrihana an-tseraserafandaharam-potoana amin'ny Internetfanodinana volaquickbooksfitantanana lazaThumbtackYelp
Mediafly: Fanamafisana ny varotra farany sy fitantanana atiny
Fampitomboana ny sanda data lehibe amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny angon-drakitra lehibe an'i Pepperdata sy ny famafana automatique